Cayaaraha jimicsiga iyo jimicsiga isboortiga - GO! DUGSIGA SANADKA
TABABARKA SPORTS GO SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > koorsooyinka our > cayaaraha > Jimicsiga iyo jimicsiga
De Ciyaaraha Spectrum raadso tababbarka ciyaaraha oo buuxa (Physical Education & Sport) (TSO). Tabobarkan firfircoon ee jirka iyo kan jireed maahan takhasus gaar ah oo ka mid ah isboorti gaar ah, laakiin wuxuu kuu soo bandhigayaa isboorti kala duwan (isboortiga, ciyaaraha kubadda, jimicsiga, dabaasha ...). Sidoo kale qaylo-dhaan, tababarka xaaladaha, muujinta iyo is-difaaca ayaa laga wada hadlay. Marka lagu daro maadooyinka guud, waxaad heli doontaa koorsooyin qaas ah. Waxaa jira safaro shisheeye ah iyo layliyo iyadoo lala kaashanayo hay'adaha ka socda qaybta isboortiga.
Arrintan tababar aad u firfircoon miyaad tahay 13 firfircoon wakhtiyada xNUMX. Fikraddani waxay ku taallaa isboortiga farsamada, laakiin waxaa sidoo kale jira dareenka dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, dhaqdhaqaaqa firfircoonida firaaqada, cayaar caddaalad ah, wadashaqeyn, masuuliyad, aqbalida qawaaniinta, qiyamka iyo caadooyinka. Waxaad ka qeyb qaadaneysaa tartamada, tartamada iyo ciyaaraha qoob ka ciyaarka. Waxaad la socotaa oo aad qabanqaabisaa maalmaha cayaaraha. Waxaa jira safaro dibadda ah iyo layliyo sida skiing, foorneynta, badda, iwm.
Xarunteenu waxay bixisaa kaabayaal badan. Hoolka isboortiga iyo meelo ka baxsan waxaad ku tababaran kartaa isboorti kala duwan. Marka lagu daro hoolka isboortiga waxaa ku yaal Rivierenhof oo leh jardiinada isboortiga ee waddada Isboortiga ciyaaraha fudud oo leh garoonada isboortiga, jawiga dabbaasha iyo fursado kale oo badan. Rinkada barafka ayaa ku yaal meel u dhow xerada.
Waxaad horeyba ugu jiri kartaa Shahaadada 1e ka bilow mid waxbarashada hore. Halkaa ka sii dheerow 1e shahaadada sports (Isboortiga ASO, Isboortiga A-stream)
Waxaad tahay qof soo-goosan
Waxaad tahay ciyaaryahan ciyaaryahan ah
Miyaad dareemeysaa jaceylka jilicsan ee calooshaada? Ma waxaad tahay qof soo jiidasho iyo ciyaaryahan koox?
Markaa tababarkani wuxuu noqon karaa wax adiga kugu habboon.
Waxaad bilaabi kartaa koorsada LO & Sport kadib doorasho kasta oo sanadka labaad ah. Waa inaad haysataa xaalad jireed oo wanaagsan oo loogu talagalay dabeecadaha kala duwan oo aad ku dhiirrigeliso inaad sameyso dadaal dheeri ah oo loogu talagalay maadooyinka aad leedahay tayada yar ama danaha.
Tababbarka horudhaca ah ee ugu fiican waa 1e shahaadada sports.
"GO! Iskuulka Spectrum Waxaan heley hagid shakhsiyeed. Dhibaatooyinkayga daciifka ah ayaa si adag u shaqeeyay si aan u guuleysto oo aan qalin jebiyo. Sababtoo ah aasaaska xooggan ee aan helay, marnaba wax dhibaato ah kuma qabin jaamacadda. Anigoo ah macallin LO, waxaan sidoo kale u dalbayaa ardayda maanta. "
Tom, ardaygii hore, hadda macallinka LO
"Ka sokow casharrada, tusaale ahaan, waxaan sidoo kale u socdaalaynaa Faransiiska. Intaa waxaa dheer, waxaa jira hawlo kale oo badan. Sidaa ayaan ku helaa khibrad badan. "
SPECTRUM ATHLETES MADAXA BULSHADA
Kadib shahaadada 3e LO & Sports waad heleysaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare. Koorsadani waxay ku siineysaa aasaas adag si aad u bilowdo daraasad sare oo ku saabsan edebta. Waxaa jira fursado shaqo oo badan; dabka, booliska, ciidamada, samatabbixiye, macallin LO, macalinka farsamada, kalkaaliyaha caafimaadka, .. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada dheeraadka ah iyo fursadaha shaqada kadib tababarkaan halkan.
Kala tasho halkan miisaska casharrada ee tababarka TSO & Sport:
Sannadka 3e ee kooban (39KB, .pdf)
Sannadka 4e ee kooban (39KB, .pdf)
Sannadka 5e ee kooban (39KB, .pdf)
Sannadka 6e ee kooban (39KB, .pdf)